Apple wuxuu bilaabay macruufka 14.4, watchOS 7.3 iyo tvOS 14.4 | Waxaan ka socdaa mac
Cusboonaysii gelinka dambe ku dhowaad dhammaan aaladaha Apple marka laga reebo Macs. Dhowr saacadood ka hor Apple ayaa sii deysay nooca beta RC loogu talagalay horumariyeyaasha macOS Big Sur 11.2 tallaabo xoogaa la yaab leh oo hadda qaybaha intiisa kale waxay diyaar u yihiin dhammaan isticmaaleyaasha.
Apple badanaa ma sii daayo noocyada beta-ka labaad ee dMusharax sii deyn Musharax ah (RC) laakiin markan macOS ayay ku dhacday. Qeybaha intiisa kale horey ayey diyaar ugu yihiin soo dejinta iyo rakibida, markaa sida ugu dhakhsaha badan ee aad u awooddo, la soco soo dejinta iyo rakibidda.
IOS 14.4, iPadOS 14.4, watchOS 7.3, iyo tvOS 14.4
ka noocyada cusub ee iPhone, iPad, iPod Touch, Apple TV iyo Apple Watch ayaa hadda diyaar u ah inay rakibtaan. Iyaga dhexdooda waxaan ka helaynaa hagaajinta lagu hirgeliyay noocyada beta dambe waxayna hagaajinayaan waxqabadka, xasilloonida, iPhone-ka waxay si fiican u akhriyaan koodhadhka QR, waxay ku daraan hagaajinta isku xirnaanta Bluetooth ama khaladaadka saxda ah ee tayada sawirrada lagu qaaday qaabka HDR ee iPhone-ka. 12 Pro, aag cusub oo loogu talagalay Apple Watch, barnaamijka ECG oo loo heli karo taxanaha 4 iyo in ka badan… Kuwani waa wax yar oo ka mid ah hagaajinta iyo hagaajinta lagu hirgeliyay noocyadan.
Apple ayaa la filayaa inay soo saarto nooca ugu dambeeya ee macOS 11.2 ee dhamaan isticmaaleyaasha saacadaha soo socda, laakiin ma jiro taariikh cayiman oo loo qabtay, ee sabir. Qalabka intiisa kale hadda waa la cusbooneysiin karaa, ee horay ula soco.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Alaabada Apple » Apple wuxuu sii daayaa macruufka 14.4, watchOS 7.3 iyo tvOS 14.4
Tani waa daabacaadda xaddidan ee Apple Watch Series 6 Collection Unity Black